Cheap Organic & Onyinye Granular Fatịlaịza Rotary mkpuchi Machine Suppliers na Factory | YiZheng
Organic & Compound Granular Fatịlaịza Rotary mkpuchi Machine bụ akụrụngwa maka mkpuchi pellets nwere ntụ ntụ ma ọ bụ mmiri mmiri pụrụ iche. Usoro mkpuchi nwere ike igbochi nsị nke fatịlaịza ma debe nri na fatịlaịza.
Gịnị bụ Granular Fatịlaịza Rotary mkpuchi Machine?
Organic & Compound Granular Fatịlaịza Rotary mkpuchi Machine mkpuchi igwe Ezubere nke ọma na nhazi nke ime dịka usoro chọrọ. Ọ bụ irè fatịlaịza pụrụ iche mkpuchi akụrụngwa. Ojiji nke teknụzụ mkpuchi nwere ike igbochi agglomeration nke fatịlaịza ma nweta nsonaazụ nwayọ. Onye na-akwọ ụgbọala na-akwọ ụgbọala na-ebugharị ka onye isi ụgbọ ala na-ebugharị belt na pole, nke ejima ejiri na nnukwu mgbanaka mgbanaka ahụ na drum ma na-agbagharị na ntụziaka azụ. Udia si uzo mmiri na ihapu si tinyekwa mgbe agwakọta site na drum iji nweta na-aga n'ihu mmepụta.
Nhazi nke igwe ihe eji emeputa uzo Rotary
Enwere ike kee igwe ahụ ụzọ anọ:
a. Ngalaba aka mgbodo: akụkụ aka mgbodo gụnyere nkwado mgbodo na mkwado azụ, bụ nke edobere na ntọala kwekọrọ wee jiri ya kwado ihe niile eji egwu maka ịhazi ma megharịa. Mgbodo mejupụtara isi mgbodo, nkwado wheel wheel na nkwado wheel. Ogologo na Angle nke igwe ahụ nwere ike gbanwee site na ịhazigharị oghere n'etiti wiil abụọ na-akwado ya n'ihu na nkwado azụ n'oge nrụnye.
b. Nnyefe akụkụ: nnyefe akụkụ na-enye ike dị mkpa maka igwe dum. Ihe ndị mejupụtara ya gụnyere etiti nnyefe, moto, eriri triangular, belata na nnyefe nnyefe wdg. Njikọ dị n'etiti reducer na gia nwere ike iji ntụpọ ma ọ bụ njikọta dabere na oke nke ịkwọ ụgbọala.
c. Ihe Drumgba ahụ: drum bụ akụkụ ọrụ nke igwe niile. Enwere igwe na-adọkpụ iji kwado ya na mgbanaka gia maka izipu na mpụga nke ịgbà ahụ, a na-agbanye ọgba aghara n'ime iji duru ihe ndị na-agba nwayọ nwayọ ma kpuchie nke ọma.
d. Ihe mkpuchi: mkpuchi na ntụ ntụ ma ọ bụ ihe mkpuchi mkpuchi.
Atụmatụ nke Granular Fatịlaịza Rotary mkpuchi Machine
(1) Teknụzụ na-agba ntụ ntụ ma ọ bụ teknụzụ mkpuchi mmiri emeela igwe mkpuchi a na-enye aka igbochi nri fatịlaịza site na nsị.
(2) Ihe isi ihe eji eme ka polypropylene lining ma obu acid na-eguzogide igwe anaghị agba nchara.
(3) Dị ka nkà na ụzụ pụrụ iche chọrọ, a na-eji igwe ihe ntụgharị a na-arụ ọrụ pụrụ iche n'ime ya, ya mere ọ dị irè na akụrụngwa pụrụ iche maka fatịlaịza njikọ.
Granular Fatịlaịza Rotary mkpuchi Machine Video Display
Granular Fatịlaịza Rotary mkpuchi Machine Model Nhọrọ
Akụkụ mgbe echichi (mm)
Ọsọ (r / min)
Nke gara aga: Rotary Drum Jụrụ Igwe
Osote: Igwe ikuku na-ekpo ọkụ